Torolalana omen’ny Global Voices momba ilay valanaretina erantany coronavirus/Covid-19 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2020 15:48 GMT
Ry vondrompiarahamonina GV malala,
Araka ny fantatrareo, nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Fikambanana Erantany misahana ny Fahasalamàna fa aretimifindra manerana izao tontolo izao ny Coronavirus/Covid-19, noho ny fahalalàna fa mety hamely ny firenena rehetra erantany ilay viriosy.
Raha jerena avy amin'ny sehatra iasàna, toerana mampitsiriritra ny an'ny Global Voices amin'ilay izy miasa anaty tontolo virtoaly, izay ny ankamaroan'ny asantsika dia ampitain-davitra avokoa ary tsy miankina amin'ny asa atao eny an-kianja na fifanatrehana mivantana amin'ireo loharano. Sady koa, marobe amintsika no mipetraka any amin'ireo toerana izay efa niharana, mampihatra na hampihatra afaka fotoana fohy ireo dingana isankarazany amin'ny fameperana ny fivezivezena sy fifampikasohana sôsialy. Betsaka amintsika ihany koa no mpivezivezy matetika.
Maro amintsika ao anatin'ny mpiandraikitra foibe sy ny tariky ny mpamoaka lahatsoratra no nanapaka hevitra hametra ny fivezivezena rehetra iraisampirenena ho amin'ny hoavy tsinjovina mialoha. Nofoanantsika ireo fifampiresahana, fifamoriana ary nahemotra ny atrikasa iray an'ny Rising Voices novolavolaina hatao ny volana Martsa. Ketrehintsika ihany koa izao izay fomba hanatontosàna fihaonana an-tserasera ho an'ireo atrikasan'olona maro hafa noeritreretina hatao ato anatin'ireo volana roa manaraka.
Raha misy isika mitady torolàlana momba ny fandehanana mivahiny na mila fanampiana amin'ny fandanjalanjàna ny risika mifandraika amin'ny fandehanana mivahiny, na hetsika hafa mandritra ity fotoana tsy mbola nisy toa azy ity, iangaviana tsy hisalasala hifandray aminay ato anatin'ny tarika mpitantana — hahafaly anay ny mandray ny antsonareo.
Manantena aho fa mba efa nanana fotoana isika nanopazana maso ny ampahany fandrakofana manokana ny Covid-19 sy Shina izay tarihan'i Oiwan Lam sy Filip Noubel, ary miaraka amin'ireo fandraisana anjara tsy mitsahatra ny mitombo avy amin'ny maro aminareo manerana izao tontolo izao. Raha toa ilay valanaretina ka misy fiantraikany amin'ireo toejavatra iainanareo amin'ny fomba tianareo hizaràna zavatra, sitrakay ny handre misimisy kokoa ireo tantara toy ilay fitantaràna manokana tena mampihetsipo an'i Oiwan momba izany atao hoe miaina ao anaty tontolo somary efa atoka-monina amin'ny ampahany izany.
Na izany aza, manoro hevitra anareo izahay, aza miroso ho lohalaharana amin'ny fanangonana vaovao ho an'ny GV mandritra io fepotoana io. Tsy misy na iray aza amintsika tokony hanao sorona ny fahasalamàntsika sy ny an'ny hafa noho ny resaka tantara iray fotsiny. Mbola tena betsaka no tsy haintsika momba io teodraharaha io, ka noho izany dia tsara indrindra ny miezaka mampiseho fahamailoana sy tsy manao hetsika tsy am-piheverana.
Antenaintsika fa mba ho zavatra mandalo vetivety ity fotoana mampikorontana an'izao tontolo izao ity. Mandra-paha, miangavy anareo, tandremo ny tenanareo sy ireo olona manodidina anareo.
Tsy ho azon-tsampona!
Ivan sy Georgia